ပေါ်တူဂီတွင်ထောင်ချခံထားရသောလိင်ပြစ်မှုကျူးလွန်သူများ၏ဝိသေသလက္ခဏာများ - ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများသုံးစွဲခြင်း၊ သားကောင်များကိုရွေးချယ်ရာ၌အလွန်အမင်းမှောက်မှားခြင်းနှင့်ရာဇ ၀ တ်မှုအမျိုးမျိုးကိုအသုံးပြုခြင်း (၂၀၁၈) - သင်၏ ဦး နှောက်ပေါ်ရှိသဘာ ၀
description: Instituto Universitário - Tese က de Doutoramento em Psicologia na ဧရိယာက de especializaçãoက de Psicologia Clínicaမျှ ISPA apresentada
စုစည်းမှုများထဲမှာပေါ်လာလိမ့်မယ်: PCLI -
Saramago, မာရီယာနာ Filipa က de Amar ။
ညစ်ညမ်းစားသုံးမှုအချို့သောလူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးချင်းအားဖြင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုများကျူးလွန်ရန်ဦးဆောင်မယ့်လှုံ့ဆျောမှုအချက်တစ်ချက်ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ဒီနေသော်လည်းအနည်းငယ်လေ့လာမှုများအထူးသလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစော်ကားမှုကျူးလွန်ကြသူတစ်ဦးချင်းစီအသုံးပြုပုံပိုကောင်းညစ်ညမ်း၏အသုံးပြုမှုနှင့်ဆက်စပ်သည့်ဝိသေသလက္ခဏာများကိုနားလည်သဘောပေါက်ရန်ရှာကြပါပြီ။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်, နှစ်ဦးစလုံးလိင်၏ကွဲပြားခြားနားသောအသက်အရွယ်အုပ်စုများ၏သားကောင်များသူတို့ရဲ့ရွေးချယ်မှုအတွက်သူတို့ကွဲပြားခြားနားသောဆက်ဆံရေးရှိတော်မူသောအတူကူးသောသူတို့ကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြစ်မှုကျူးလွန်သူ၏ဖြစ်ရပ်ဆန်းအပေါ်အချက်အလက်များ၏မရှိခြင်းလည်းမရှိ။ ဤရွေ့ကားတစ်ဦးချင်းစီအများအားဖြင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ recidivism နှင့်အတူဆက်နွယ်နေတဲ့စွန့်စားမှုအချက်ဖြစ်သောခံရသူတစ်ဦးထက် သာ. ကြီးမြတ်သောအရေအတွက်ရှိသည်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြစ်မှုကျူးလွန်သူပြစ်မှုများ၏အခြားအမျိုးအစားများကိုကျူးလွန်ရန်အဘို့အထို့ပြင်ပြစ်မှုကျူးလွန်သူ '' ပြစ်မှုဆိုင်ရာဘက်စုံသုံး recidivism ၏ကြီးမြတ်သောအန္တရာယ်မှဆက်စပ်ဖြစ်တယ်, ဒါကြောင့်လည်းဘုံ။
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြစ်မှုကျူးလွန်သူနှင့်အတူဤအဒိုင်းနမစ်၏ပိုကောင်းတဲ့နားလည်မှုကိုအထောက်အကူပြုရန် ရည်ရွယ်. ဤသည်လေ့လာမှု။ အထူးသဖြင့်ကျနော်တို့ရည်ရွယ်: (က) အညွှန်းကိန်းပြစ်မှု၏အချိန်မှာလိင်ပြစ်မှုကျူးလွန်သူအားဖြင့်ညစ်ညမ်းစားသုံးမှုအမျိုးမျိုးရှုထောင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာများနှင့်ပစ္စည်းများနှင့်မသောသူတို့အားဤအမျိုးအစားများကိုသုံးတဲ့သူတွေကိုခွဲခြားနိုင်ခဲ့ကြတယ်ကြောင်းအင်္ဂါရပ်တွေကိုဖေါ်ထုတ်ရန်, (ခ) တစ်ဂီနမူနာကြားတွင် crossover လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြစ်မှုကျူးလွန်သူသားကောင်ရဲ့ရွေးချယ်မှု၏ပျံ့နှံ့မှုဆနျးစစျဖို့အဖြစ် sociodemographic နှင့် criminogenic variable တွေကိုအစုတခု crossover ဖြစ်ခြင်းအဖြစ်ပြစ်မှုကျူးလွန်သူများခွဲခြားဖို့လှူဒါန်းခဲ့လျှင်အတည်ပြုရန်; နှင့်ရာဇဝတ်မှုအပြုအမူတွေ၏ etiology အပေါ်နှစ်ခုသီအိုရီမော်ဒယ်များကိုစမ်းသပ်ဖို့ (ဂ) လိင်ပြစ်မှုကျူးလွန်သူအကြားရာဇဝတ်မှုအထူးပြု / ဘက်စုံသုံး၏ဆက်စပ်ဖို့လျှောက်လွှာတင်ခဲ့တယ်။
သုတေသနထွက်သယ်ဆောင်ရန်တစ်ခုကနဦးနောက်ကြောင်းပြန်နမူနာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြစ်မှုများစာကြောင်း်ထမ်းဆောင်ခဲ့ 261 အထီးအကျဉ်းသား၏တရားဝင်ထောင်ထဲမှာမှတ်တမ်းများကနေရေးဆွဲခဲ့သည်။ သာ 146 အကျဉ်းသားအဆိုပါအကဲဖြတ်ညစ်ညမ်းပါသည်သူတို့ရဲ့သမိုင်းနှင့် ပတ်သက်. အင်တာဗျူး protocol ကိုထည့်သွင်းထားတဲ့လေ့လာမှုများ, နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ကူးယဉ်အကဲဖြတ်ကြောင်းအစီအမံ, Impulse နှင့်ကိုယ်ကျင့်တရားဆင်ခြင်ခြင်းတွင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ရန်သဘောတူညီခဲ့ကြသည်။ ယခင်ကပေါ်တူဂီအခြေအနေတွင်များအတွက်အဆင်ပြေအောင်မဟုတ်သူများသည်အတိုင်းအတာနောက်ပိုင်းတွင်ပစ္စုပ္ပန်သုတေသနအတွက်အတည်ပြုခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါညစ်ညမ်းစားသုံးမှုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု၏ရလဒ်များလိင်ပြစ်မှုကျူးလွန်သူများ 43% ကိုအညွှန်းကိန်းပြစ်မှု၏အချိန်မှာညစ်ညမ်းအတွက်မြင်အကြောင်းအရာမျိုးပွားရန်ကြိုးပမ်းခဲ့သည်နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ကူးယဉ်အချိန်တွင်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုသောဘဲလျက်သူတို့ကိုလှူဒါန်းခဲ့ကြောင်းကိုညွှန်ပြ။
ဒုတိယလေ့လာမှု၏ရလဒ်များအညွှန်းကိန်းပြစ်မှု, အရက်အလွဲသုံးစားမှု, မုဆိုးမ / ကွဲကွာ / ကွာရှင်းခံရနှင့်အလုပ်ခံရမှာအသက်အရွယ်ယေဘုယျအားဖြင့်ကူးတော်မူပြီးမှတစ်ဦးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြစ်မှုကျူးလွန်သူများဖြစ်နိုင်ခြေဖို့လှူဒါန်းခဲ့ကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည်။
တတိယဆောင်းပါးမှာတော့ကိုယ်ကျင့်တရားဆင်ခြင်ခြင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြစ်မှုကျူးလွန်သူအကြားရာဇဝတ်မှုအထူးပြု / ဘက်စုံသုံး၏တစ်ဦးတည်းသောသိသိသာသာခန့်မှန်းခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်ဤသုတေသနလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဖောက်ပြန်တဲ့သူအများအပြားရှုထောင့်မှနှငျ့ပတျသကျသောအနုပညာပြည်နယ်၏ပိုကောင်းတဲ့နားလည်မှုအဘို့အခွင့်အရေးကွီးသောပင်ကိုယ်မူလသက်သေအထောက်အထားများနှင့်အတူလှူဒါန်းခဲ့သည်။
ရလဒ်အန္တရာယ်အကဲဖြတ်ဒါမှမဟုတ်အထူးသညျဤလူတစ်ဦးချင်းစီ၏အသွင်ပြင်လက္ခဏာများ လိုက်. ကုသမှုအစီအစဉ်များ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ဖြစ်စေ, ဒီဧရိယာ၌အလုပ်လုပ်ကိုင်ပညာရှင်များအနေနဲ့သက်ရောက်မှုရှိစေခြင်းငှါ။